သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> SMD Rework ဘူတာ -> ဂဟေဆက် Rework ဘူတာ
ကျနော်တို့ကြည်ကြည်များမှာ Taiwan ဂဟေဆက် Rework ဘူတာ ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, တင်ပို့သူနှင့်စက်ရုံ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် oriented အရည်အသွေးဖြစ်ရခြင်း၏ကွဲပြားဂုဏ်သတင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှရရှိခဲ့ပြီးသည့်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်၏တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးပြည့်လိုအပ်ချက်ကိုက်ညီသောထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုပူဇော် Taiwan တင်ပို့သူ။ ကျနော်တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် impeccable ထုတ်ကုန်တွေထောက်ပံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုဤကဏ္ဍကိုဦးဆောင်ကုန်သည်တဦးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတီထွင်ဆန်းသစ်အတွက်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏ကြသည်ကတည်းကကျနော်တို့ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်း & အရည်အသွေးသည်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုမောင်းနှင်နှစ်ပေါင်းများစွာကျော & ကာလအစဉ်အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေမ၌ထားလေ၏။
အရည်အသွေးမြင့်မားန်ဆောင်မှုများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအဘိုးနှင့်ပေါင်းစပ်။ ဒါ့အပြင်ငါတို့သည်သင်တို့၏ designated စတိုင်များသည်နှင့်အညီထုတ်လုပ်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ရိုးသားစွာဖြင့်သင်တို့၏ကောင်းသောကုမ္ပဏီတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကောင်းတစ်ခုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ကြိုဆိုပါတယ်!
multi-function ကို SMD Rework ရေးစခန်းများ
တစျခုတှငျ 1. 5: ဒီဇိုင်းကိုအားဖြင့်ပြုပြင်သောအာကာသချွေတာ, သုံး function ကိုပိုင်ဆိုင်အလွန်အသုံးပြုသူများလိုအပ်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်။ ဂဟေ, desoldering နှင့်ပူပြင်းလေကောင်းလေ။
2. အထူးအသိဉာဏ် chip ကို microcomputer ထိန်းချုပ်မှု: သော့ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် operating ဒီဇိုင်းကို double LED Display ကိုကအဆင်ပြေပြေနဲ့အဆင်ပြေစစ်ဆင်ရေးလုပ်ရမည်။
3. အပူချိန်ရွေးချယ်ခြင်း: ဖာရင်ဟိုက်နှင့် centigrade (စင်တီဂရိတ်) အပူချိန်။
4. အပူပေးစက် / Sensor ကိုထောက်လှမ်းပျက်ကွက်: အာရုံခံကိရိယာဆားကစ်ပျက်ကွက်လျှင်, display ကို "ကို S - E သည်" ဖတ်နှင့်အပူပေးစက်ပါဝါဖြတ်လေ၏။ အပူပေးစက် circuit ကိုပျက်ကွက်လျှင်, display ကိုဖတ်ကြလိမ့်မည် "H - E သည်" နှင့်အပူပေးစက်ပါဝါဖြတ်လေ၏။
5. အပူချိန် "သော့ခတ်-ထွက်" feature ကို: အဆိုပါအပူချိန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင်ပြေကြောင်း "စကားဝှက်" code ကသော့ခတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
6. Esd ဘေးကင်းလုံခြုံနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် circuitry နှုန်းကိုမြင့်တက်စေပါတယ်: အဆိုပါ "သုည Voltage" အီလက်ထရောနစ် switching ဒီဇိုင်းကိုလည်းဗို့နှင့်လေ့လျော့နည်းထိရောက်စွာအသုံးပြုထုတ်လုပ်ထိခိုက်လက်ရှိနှင့် transient ဗို့ချပြီးကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆန့်ကျင်လက်ရှိအထိခိုက်မခံအစိတ်အပိုင်းများကို (CMOS devices များစသည်တို့ကို) ကာကွယ်ပေးသည်စက်မှုဘူတာပြောင်း။
7. နောက်ကျခဲ့စုတ်ယူခြင်း: ပျဉ်းတက်နှင့်သဟဇာတမဂဟေဆက်၏ပြဿနာပပျောက်ရန်, တစ်ဦးနှောင့်နှေး switch သည်အင်္ဂါရပ် actuators switch ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက် pump 1.5 စက္ကန့်နို့စို့ဆက်လက်ခွင့်ပြုထားသောယူနစ်များအတွက်ထည့်သွင်းခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
8. Lightweight ဂဟေကိုသံ: အေးကမ္ဘာမှာဆန်စပါးနှင့်အော်ပရေတာပင်ပန်းနွမ်းနယ်ကိုကာကွယ်တားဆီး Ergonomics mini ကိုလက်ကိုင်။
9. စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနချွေတာ mode ကို: ဘူတာ 20 မိနစ်အကြာမှေးမှိန်ခဲ့လျှင်, စွမ်းအင်ချွေတာ feature ကိုအလိုအလျှောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံပါလိမ့်မယ်, အပူချိန်ခြိနျးအပူချိန်ကငုံ့ 150 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှဝင်။ ထိုဂဟေဆက် / desolder Wand မှုဖှငျ့အာဏာကိုကယျတငျ feature ကို disengage လိမ့်မည်နှင့်ယူနစ်ကိုချက်ချင်းလျပ်တပြက်အပူချိန်တက်ကုန်းအားကြလိမ့်မည်။ တဲ့အခါမှာ 40 ကျော်မိနစ်စစ်ဆင်ရေးမပါဘဲအဓိကအာဏာပါဝါစားသုံးမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ပျဉ်းဘဝကိုတိုးချဲ့ရာ "sleep mode" ကိုပိတ်ထားလိမ့်မည်။
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: သင်ဟာယူနစ် "အိပ်စက်ခြင်း" mode ကိုဝင်သည့်အခါအလုပ်စတင်မှတဖန် "ON" ပထမဦးဆုံးယူနစ်ပိတ်ထားပြီးတော့ပြောင်းလဲရှိသည်။
10. သံအလုပ်လုပ် option ကို: ဂဟေနှစ်မျိုးလုံး, desoldering ၎င်းတစ်ချိန်တည်းမှာသုံးနိုင်သည်။ သင်သာဂဟေသို့မဟုတ် desoldering ကိုသံကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသော့ "SET + ▲" ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဤအချိန်တွင်, သင်ထားပေးသောသံ status ကိုရပ်ဆိုင်းထားပယ်အာဏာကိုရိုက်ထည့်ပါပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအပူပေးစက်အာဏာသည်ပြတ်ဆိုလိုသည်။ စာနယ်ဇင်း အကယ်. "▼" ထို့နောက်အပူပေးစက်ပါဝါပေါ်ပါလိမ့်မည်။
11. SMD မှေးညှပျ: အဆိုပါနောက်ထပ် feature ကိုအထူး reworking SMD ချစ်ပ်, မဲဆောက်, Flat pack ကို ICS '' စသည်တို့သည်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ TWZ100 မှေးညှပျကာရွေးချယ်မှုအဖြစ်ဂဟေကိုသံနှင့်အတူလဲလှယ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီစစ်ဆင်ရေးကိုဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင်, အဓိက switch သည်ယူနစ်မှမည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားဖို့ "OFF" ဖြစ်ရမည်သေချာပါစေ။